Jump Tambo, Digital Weight Calories Nguva Kuseta Kusvetuka Tambo neCounter Yemukati uye Kunze Kurovedzera
Yakavakwa-mukati-yakanyanya kurongeka magineti control counter iyo inokutendera kuti utarise nguva uye kutenderera uye kuti ingani macalorie awakapisa.Iyo diki skrini inoratidzira pane iyi crossfit kusvetuka tambo inoratidza Huremu, Calorie uye Denderedzwa inobatsira kutarisa mafambiro ako ekurovedza muviri.
Jump Tambo, Digital Weight Calories Nguva Kuseta Kusvetuka Tambo neCounter yeIndoor nePanze Exercise Inogadziriswa Rope Workout jumprope yeVana, Vakadzi, Varume
【SUKA TAMBO NE COUNTER】:
Yakavakwa-mukati-yakanyanya kurongeka magineti control counter iyo inokutendera kuti utarise nguva uye kutenderera uye kuti ingani macalorie awakapisa.Iyo diki skrini inoratidzira pane iyi crossfit kusvetuka tambo inoratidza Huremu, Calorie uye Denderedzwa inobatsira kutarisa kufambira mberi kwako kwekurovedza muviri.
【CHINHU CHOKUJUMUKA CHECHITAMBO】:
tambo yekusvetuka yekugadzira maekisesaizi ine 280cm kureba kwetambo, gadzirisa kureba hukuru pasina zvishandiso zvemunhu akareba.Kwete chete vanhu vakuru asiwo mwana vanogona kuitamba, inogona zvakare kushandiswa sechitoyi chinoyevedza.
【CHIRERU-CHERERERE KUSVAKUKA CHEMBE HANDLE】:
Mubato mumwechete unorema magiramu 130 chete kuita kuti zvive nyore uye zvakasununguka kubata.Yakasarudzika ergonomically uye anti-kutsvedza akagadzirwa zvibato zvinopa kunyaradza kwakaringana kwekunzwa kweruoko.Yakakwana Workout accessories zvevakadzi nevarume.
【MATMBO YAKAKODZERA YEKUITA】:
Zviri nyore zvemukati mutambo uye yakakwana yekudzidzira midziyo yemunhu wese, chengetedza uine hutano uye unakirwe nerwendo rwako rwekusimba nekumhanya kwako wega mukunyaradza kweimba yako.
【KUGARA HUNHU UNE GUARANTEE】:
Tambo yetambo yesimbi yakaputirwa nePVC, iyo inoratidza kusimba, kutsungirira uye kutsetseka, inobvisa kudhumhana uye kukochekera uye inobvumidza iwe kusvetuka pane chero nzvimbo.HUPENYU GUARANTEE, kana iwe uchinge uine chero nyaya netambo yako yekurovedza muviri chero chikonzero, ingo bata timu yedu yekutsigira.
Zvakapfuura: Custom Steel Wire Yakaremerwa Yekusvetuka Tambo ine Mubato Wakareba Wevana Kusvetuka Kumhanyisa Kurovedza
Zvinotevera: Professional Speed ​​Jump Rope, Flexible Jump tambo dzekusimba kwevakadzi varume, Corssfit Jump Rope, Quite Skipping Rope
tambo yokusvetuka isina tambo, kugwinya kusvetuka tambo, nyanzvi yekusvetuka tambo, kusvetuka tambo akachenjera, svetuka tambo tenga, bata kusvetuka tambo,